Matongerwo eNyika, 30 Kurume 2018
Chishanu 30 Kurume 2018
Ambassador Thomas Vanoti Kugadzirisa Hupfumi hweZimbabwe Kuchanetsa
Vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Junior avo vasiya basa zviri pamutemo nhasi vachiyambira Zimbabwe kuti inofanira kusunga dzisimbe kana ichida kugadzirisa zvinhu munyaya dzezvehupfumi.
Vamwe vevanhu vakamboshungurudzwa nevasori munguva dzesarudzo dzakaitwa muna 2008 vanoti nyaya dzesarudzo dzinounza pfungwa dzekutya. Vanhu ava vanotiwo hapana rubatsiro rwavakawana kubva kuhurumende kana kumapato avo semuripo.
Mari Yotadzisa Vakawanda Kuenda Kuzororo reEaster
Vanhu vakawanda vange vachikwira mabhazi vachienda kunotambira zororo reEaster kunzvimbo dzakasiyana siyana, kunyange hazvo vanga vachichema nerekushaya mari.
Hurumende Yokurudzirwa Kukasika Kuve neMutemo Unotsigira Chibvumira cheAfrican Charter
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti ari kutambira nemufaro mukuru zvakaitwa nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, zvokusaina chibvumirano cheAfrican Charter, icho chinobata nyaya dzesarudzo nehutongo hwejechetere.
Heal Zimbabwe Trust Inoburitsa Gwaro Rinotaridza Kukwira kweKutyorwa kweKodzero Dzevanhu
Gwaro iri riri kutaridza kuti kwakava nenyaya dzemhando idzi dzinosvika makumi maviri neina, mumatunhu anosvika gumi nemanomwe munyika yose.
Vachakwikwidza Vakazvimirira muSarudzo Vanoumba Mubatanidzwa wePOVO
Mutauriri wemubatanidzwa uyu, Mufundisi Evan Mawarire, vakati chinangwa chavo ndechekushanda pamwe chete vachitsvaga rubatsiro kuti vakunde musarudzo kuitira kuti vagadzirise zvinhu muHarare izvo vanoti zviri kuvhiringwa nemakanzuru anobva kumapato ezvematongerwo enyika.
Hurumende Inoparura Matare Anotonga Nyaya dzeHuwori
Kune matare matatu akavhurwa muHarare uye mamwe maviri kuBulawayo. Judiciary Services Commission yakatodoma vatongi gumi nevaviri kuti vatonge nyaya dzehuori idzi.
Dare Rinoti Zimbabwe Haikwanisi Kudzosera Vasungwa kuAmerica
Hurumende yeZimbabwe haikwanise kushandisa chibvumirano chayo che Extradition Treaty icho yakanyorerana ne America muna 1997.
VaChamisa Vovimbisa Vanhu Huchi neMukaka Kana Votonga Zimbabwe
Mutungamiri weMDCT, VaNelson Chamisa, neChitatu vakaparura hurongwa hwekusangana nevatsigiri vavo munzvimbo dzavanogara vachivimbisa veruzhinji kuti makambani mazhinji akavharwa achavhurwa kana vachinge vapinda muhutongi.
Kuwanda kweMapato eMatongerwo eNyika Kwotomesa Vamwe Musoro
Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti pane mapato anodarika zana nemasere akazivisa kuti anoda kukwikwidza musarudzo dzegore rino.
Mamwe Makambani Ozorwa Mafuta eNguruve Yaasina Kudya paNyaya yeKuburitswa kweMari Kunze kweNyika
Mukuru weZNCC, VaChristopher Mugaga, vatiwo shuviro yavo ndeyekuti zvabuda mumusangano wavaita zvisvike kumutungamiri wenyika kuti azive kuti vamwe vevari kupomerwa kubudisa mari zvisiri pamutemo vakachena panyaya idzi..